मन्त्री लालबाबु भन्छन्- आलु ब्यापारी छन्, जल्ले जाँड ख्वाइदिन्छ, लेख्छन् ! — Himali Sanchar
मन्त्री लालबाबु भन्छन्- आलु ब्यापारी छन्, जल्ले जाँड ख्वाइदिन्छ, लेख्छन् !
मैले के अपराध गरें ? कसैले बताइदिनोस्
काठमाडौं -अघिल्लो कार्यकालमा डीभी/पीआरवाला कर्मचारीहरुमाथि डण्डा चलाएर वाहीवाही कमाएका मन्त्री लालबाबु पण्डित अहिले मिडियाको नजरमा खासै परेका छैनन् । लोकपि्रय नेताको छवि बनाएका पण्डितले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् ।मन्त्री पण्डित सुरुमा कर्मचारीमाथि कडारुपमा प्रस्तुत भएका थिए । अहिले उनी खासै कडारुपमा प्रस्तुत भइरहेका छैनन् । सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि मन्त्री पण्डितले आफ्नो लोकपि्रय छवि बचाउन नसकेको फाट्टफुट्ट चर्चा हुन थालेको छ ।
यसै सन्दर्भमा हामीले मन्त्री पण्डितलाई सोध्यौं-
के काम गर्नु ? जे जिम्मेवारी छ, त्यही न गर्नु । नयाँ-नयाँ कुराहरु, अहिले सबैभन्दा ठूलो व्यवस्थापनको काम हो कि होइन ? संघीयतामा अब संघीय मन्त्रालयले झण्डै-झण्डै सवा लाख कर्मचारी अनि ३७ हजार जनप्रतिनिधिको व्यवस्थापन भनेर त्यसमा पनि ३ तहको व्यवस्थापन त्यत्तिकै भएको छ ?
मैले प्रशासनिक अन्तरिम काल असार मसान्तभित्र सक्छु भनेको थिएँ, अस्ति सकियो । संरचना जम्मै तयार भइसक्यो । दिनका दिन हेर्नुहुन्छ नि । कति सय मान्छे मैले पठाइराखेको छु सरुवा गरेर हँ ? त्यो त चर्चा हुँदैन । कल्ले जाँड खुवाइदिन्छ, लेख्देऊ लेख्देऊ भनेर । कसलाई कहाँ चित्त बुझेको हुँदैन, खटाएको ठाउँमा ।
सरकारी कर्मचारी खटाएको ठाउँमा जान नपाए, काठमाडौंमै स्वादले बस्न पाए रमाउँथे होला नि । त्यसकारण यसमा केही कुरा छैन । अलिअलि खेती भएन भने पत्रिका पनि बिक्दैन, अलिअलि खेती भएन भने अनलाइन पनि चल्दैन । अलिअलि नेगेटिभ-नेगेटिभ स्वाद लिऔं भनेर कतिपय मिडियाहरु हुन्छन् । मैले देख्छु कि कहिलेकाँहि ।
अब, राष्ट्रिय चर्चित मिडिया एउटा कुरा हो । जिम्मेवार मिडिया अर्को कुरा हो । नभए अहिले त कतिपय चाहिँ आलु ब्यापारीले पनि अनलाइन खोल्या छ । मेरो चुनावकै बेलामा देख्नुभएन ? लालबाबु पण्डित जेलमा भनेर । न्युजचाहिँ हुनुपर्ने लालु यादवको, स्वाद लिनको निम्ति लालबाबु पण्डितको फोटो राखेर जेलमा भनेर आयो । यस्ता खालका गैरजिम्मेवार मिडिया जो हुन्छन् नि, त्यस्ता गैरजिम्मेवार मिडियाले लेख्छन् । प्रतिपक्षका पनि छँदैछन्, त्यसले सोसियल मिडियामा सेयर गर्‍या छ, गर्‍या छ । नक्कली फेक नामले सेयर गरेकोले के अर्थ राख्छ र ? केही अर्थ राख्दैन ।
तर, यिनै मिडियाले तपाईलाई एक समय व्यापक समर्थन गरेका हैनन् र ? आशा गरिएका नेता भन्दै चुनावका बेलामा तपाईलाई मिडियाले ठूलो साथ दिएको थियो । अहिले तिनै मिडियालाई गाली गर्न मिल्छ ?
मानवीय व्यवस्थापनको कुरा तपाईले संसारभरिकै हेर्नुभयो भने कति लाग्या छ ? नेपालजस्तो देशमा हामी कति फास्ट गर्दैछौं ? जहाँ कि अहिले पनि थुप्रै ऐन कानूनहरु बनाउन बाँकी छन् । बन्ने क्रममा छन् । हाम्रो देशमा प्रतिपक्ष कस्तो छ, त्यो पनि बुझिहाल्नुहुन्छ । यो सबै भएकाले गर्दा पाइला फुकीफुकी चाल्नुपर्ने स्थिति छ । तर, मैले चालेको कुन पाइला खराब छ ? मलाई बताइदिनुपर्‍यो । बताइदिनुपर्‍यो नि यो पाइला तपाईको गलत छ भनेर ।
जस्तो- तपाईले सुरुमा स्वेच्छिक अवकाशको विषयलाई लिएर कर्मचारीहरुलाई अलि बढी नै गाली गर्नुभयो भनेर आलोचना भएको थियो….
तर, तपाईबारे ट्रेड युनियनकै नेताहरुले प्रधानमन्त्रीसँग पुगेर तपाईको अभिव्यक्तिप्रति गुनासो त गरे नि हैन र ?
अनि, प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रीको अडान गलत हो र तिमीहरुले लिएको अडान ठीक हो भनेर भन्नुभयो ? संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको भन्दा फरक अडानमा कोही मन्त्री जान सक्छ ? सक्दैन नि ।
जुनबेलामा भुइँचालो आयो, त्योबेला सरकारको मूल्यांकन हुन्छ कि व्यवस्थापनको काम सकिइसकेपछि सरकारको मूल्यांकन हुन्छ ? अहिले सरकारले विभिन्न सेक्टरबाट काम गरिराखेको छ । अपराध के गर्‍यो ? योचाहिँ आउनुपर्‍यो नि ।
देखिएकै छ नि, कर्मचारी संयन्त्रमा घुसखोरी रोकिएको छैन । जस्तो मालपोतमा…. सरकारी अड्डा अदालतमा….
अनि मालपोत कन्ट्रोल गर्ने मेरो जिम्मा हो ? मैले तपाईलाई सोधें- मालपोतमा कर्मचारीले घुस खायो भने कर्मचारीलाई कारवाही गर्ने अधिकार कल्लाई छ ?
यसो भन्न त मिलेन नि मन्त्रीज्यू, सरकारको समग्र कुरा गर्दा कर्मचारीतन्त्रको नेता त तपाई नै हो नि । कर्मचारीतन्त्रको जिम्मा तपाईमाथि छ…
तर, तपाईले टेलिभिजनका कतिपय अन्तरवार्तामा सरकारले के काम गर्‍यो भनेर सोध्दा ‘सुन तस्करलाई पक्रेको देख्नुहुन्न ?’ भन्नुहुन्थ्यो । सुन तस्कर पक्रने पनि त गृहमन्त्रालय हो, तपाई त होइन….
हो, हामीले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणबारे सोधेको….
अहिले नै भनौं न, अख्तियारले कतिपय केसमा पक्रिएको छ । त्यसलाई हामी ठीक भन्छौं कि गलत भन्छौं ? अन द स्पट पक्रिनु त ठीक हो । तर, त्यसको जायज-नाजायज कुराको फैसला त कानूनीरुपमा पछि हुन्छ । तर, पक्रिनु त ठीक हो नि । गलत काम गरेवापत पक्रिएको हो । मैले भनेको त बुझ्नुभयो नि ।
तपाई हेर्नुहोस्, म आउँदाखेरि झण्डै झण्डै ५० प्रतिशतको हाराहारीमा कर्मचारीहरु काममा गएका थिएनन् । अहिले केहीकेही, ०.५ प्रतिशत अलमल होला, नभए सय प्रतिशत खटाएको छु । सय प्रतिशतमा प्रशासकीय प्रमुखहरु पठाइसकेको छु ।
केही केही काजमा गएका मान्छे रिसाए भने…त्यो त सयमा सय प्रतिशत धानखेतमा फलेको धान त भकारीमा आउँदैन । मिलमा गएको धानको चामल सयमा सय प्रतिशत घरमा आउँदैन । पकाइसकेको भात पनि सयमा सय प्रतिशत मुखमा पुग्दैन ।
यो जम्मै एक जनाले कुन मुडमा लेखेको हो । तिनै पत्रपत्रिकामा हैन, मेरो विषयमा हुट्टीट्याउँले आकाश थाम्दैन भनेर लेखेको ? हेडलाइन नै न्युज निकालेको त्यसैले होइन ? हुट्टीट्याउँले आकाश थाम्यो कि थामेन ? मेरो एजेण्डा आउँदा लेख्ने त तिनीहरु नै हुन् नि ।
संसद बिघटनदेखि संकटकाल घोषणासम्मको प्रधानमन्त्री केपी शर्माकाे तयारी
वरिष्ठ नेता खनालले गरे सुरेन्द्र पाण्डेमाथिको दुर्व्यवहारको निन्दा
चितवनमा नेकपाकै कार्यकर्ताले पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेलाई लखेटे
झापा जिल्लाका नेकपा नेताहरू पार्टी एकताकै पक्षमा, जनमतको उपेक्षा नगर्न आग्रह
सचिवालय बैठककै समयमा प्रधानमन्त्रीले डाके मन्त्रिपरिषद् बैठक
नितिका एण्ड राज कन्ट्रक्सनले ईन्जिनियरलाई अटेर गर्देे पुनः सडक निर्माण
रबिन्द्र बराल माेरङकाे- रंगेली नगरपालिका वडा नम्बर ७ स्थित मालपोत कार्यालय अगाडि देखि मुरारी सोनीको...
सन्सारी मन्दिरको निर्माण कार्य सुरु
रबिन्द्र बराल,मोरङ – रंगेली नगरपालिका ७ स्थित चिस्याङ खोलाको बगरमा रहेको श्री सन्सारी माई मन्दिरमा प्रदेश...
आठ महिनादेखि बन्द मनकामना केवलकार सञ्चालन गर्न स्थानीयको माग
गोरखा – करिव आठ महिनादेखि बन्द रहेको मनकामना केवलकार संचालन गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्...
काठमाडौं उपत्यकामा २४ घण्टामा थपिए १ हजार ७ कोरोना संक्रमित
काठमाडौँ — पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा १ हजार ७ जना कोरोना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य...
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ताला ४०दिन सम्म पनि खुलेन
जुम्ला — कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तेस्रो डीन नियुक्तिपछि कर्मचारी कल्याणकारी समाजले लगाएको ताला ४०...
हङकङमा नेपाली जिरे खुर्सानी जल्दा ७ जनाको मृत्यु, सबैको पहिचान खुल्यो
झुक्याएर भारत लजादै गरिएका १२ युवतीको उद्धार